१८औं एसियाडको भव्य उद्घाटन – www.janabato.com
Latest TOP STORIES खेलकुद समाचार
१८औं एसियाडको भव्य उद्घाटन
२ भाद्र २०७५, शनिबार १५:०९ August 18, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
एजेन्सी/पावर अफ एसिया (एसियाको शक्ति) नारासहित १८औं एसियाली खेलकुद (एसियाड) को शनिबार इन्डोनेसियाको राजधानी जाकर्तास्थित बुङ कार्लो रंगशालामा भव्य उद्घाटन भएको छ। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति बुङ कार्नोले निकै आकर्षक समारोहमा १८औं एसियाडको उद्घाटन गरेका हुन्।
उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउदै इन्डोनेसियाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन समेत गर्यो। जसको संकेत स्वरुप इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति विडोडोले ‘एसियाको नयाँ शक्तिमा स्वागत छ’ भनेका थिए।उनले उद्घाटनका लागि आफ्नै बाइक चलाएर रंगशाला आएका थिए। त्यसपछि उनी स्टन्ट गरेर मन्तव्य दिने स्थानमा पुगेका थिए।
उद्घाटन समारोहमा नेपालसहित ४५ देशका ६ हजार खेलाडी, प्रशिक्षक, अफिसियल र अतिथीले भाग लिए।
नेपालको तर्फबाट भारोत्तोलन खेलाडी कमलबहादुर अधिकारीले झन्डा बोेकेका थिए। नेपाली टिमका पुरुष खेलाडी ढाका टोपी र दौरा सुरुवात तथा महिला खेलाडी सारीमा रंगशालामा उपस्थित भएका थिए। नेपालले यो एसियाडमा २९ खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ।
रंगशालामा भएको मार्चपासमा सबैदेशका खेलाडीहरुले आफ्नो देशको संस्कृति झल्कने भेषभूषा लगाएका थिए। उद्घाटन समारोहमा ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिय (ओसिए) का अध्यक्ष शिख अहमेद अल फहदा अल सबाह र १८औं एसियाड आयोजक समितिका अध्यक्ष इरिक तोहिरले पनि स्वागत मन्तव्य दिएका थिए। सबाहले इन्डोनेसियालाई धन्यवाद दिएका थिए। यस्तै इरिकले पनि इन्डोनेसियाको संस्कृति बारे बाखन गर्दै सबैलाई स्वागत गरेका थिए।
उद्घाटन समारोहको मञ्चको लम्बाई १ सय २० मिटर, चौडाई ३० मिटर र उचाई २६ मिटरको थियो। मञ्चको दृश्य पहाडको जस्तै हुनेछ भने इन्डोनेसियाका रुख पनि देखिएका थिए। ४ हजारले आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। खेलाडी रंगशाला आउदा उनीहरुले लगातार नृत्य गरेका थिए।
एसियाडमा ४५ देश सहभागी हुने भएपनि ४४ देशको झन्डा मात्र देखियो। किनकी दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको संयुक्त टोली उद्घाटन समारोहमा सहभागी भए। मार्चपासमा दुवै देशका खेलाडीहरु गरुण चराको आकारको ट्याक सुट लगाएर उपस्थित हुँदा रंगशालामा उपस्थित अथितीले स्वागतमा ताली बजाएका थिए।
औपचारिक समारोहपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरु भयो। उद्घाटन समारोहमा इन्डोनेसियाका १८ स्टार कलारकले आफ्नो प्रस्तुती दिनेछन्। अन्गुन, राइसा, टुलुस, इडो कोन्डोलोगिट लगायतले आफ्नो प्रस्तुति दिने छन्। गायक गायिका बाहेक ३६ सय डान्सरले पनि आफ्नो प्रस्तुती दिनेछन्। इन्डोनेसियाका स्टार कोरियोग्राफर डेनी मलिक र इको सुप्रियान्तोले ३६ नृत्यको निर्देशन गर्नेछन्।
← ‘कविता सरल भाषामा गम्भीर रहस्यहरु उद्घाटित गर्ने बिधा हो’ : कवि श्यामल
आरम्भ समूहको सय दिने अभियानको समुद्घाटन →
राष्ट्रियताको पक्षमा नेकपाले गाड्यो सिमा क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा
२७ माघ २०७४, शनिबार ०५:१३ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on राष्ट्रियताको पक्षमा नेकपाले गाड्यो सिमा क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा
सगरमाथाको उचाई फेरि नापिदै
९ आश्विन २०७४, सोमबार ०७:२० जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on सगरमाथाको उचाई फेरि नापिदै
जथाभावी कर असुल्न थालेपछि खाद्यान्न नेकपाको नियन्त्रणमा
८ माघ २०७४, सोमबार ०६:३७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on जथाभावी कर असुल्न थालेपछि खाद्यान्न नेकपाको नियन्त्रणमा